ကိုဗစ် - ၁၉ အား ထိန်းချုပ်ရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ တုံ့ပြန်မှုများ - ISP-Myanmar Special Series
By L Gum Ja Htung in Articles No Comments
ကိုဗစ် – ၁၉ အား ထိန်းချုပ်ရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ တုံ့ပြန်မှုများ
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID – 19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကို ထိန်းချူပ်နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ မူဝါဒများချမျတ်၍ တုံ့ပြန်လျှက်ရှိပါသည်။ ကောင်းမွန်သော မူဝါဒများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် နိုင်ငံများ၏ တုံ့ပြန်သည့် ပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်၍ သုံးသပ်သင့်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ နိုင်ငံများ၏ အခြေအနေများ၊ လူဦးရေ၊ နယ်မြေ အနေအထားများ ကွဲပြားမှုရှိသောကြောင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရန် တုံ့ပြန်သည့် ပုံစံများသည် တူညီနေမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရသည့် ဆေးစစ်ခြင်း၊ နယ်စပ်များကို ပိတ်ခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်ခံရသူများနှင့် ကူးစက်ခံရသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ များကို အသွားအလာကန့်သတ်မှု၊ လူမှုဖူလုံရေး အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ နောင်ပြန်ပွင့်လာမည့် စီးပွားရေး အခင်းအကျင်းကိုပါတွက်ဆ၍ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသည့် စီးပွားရေး လှုံ့ဆော်မှုစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာတို့မှာ လေ့လာသင့်သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်သည့် မူဝါဒများချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်နေသလို COVID–19 ကာလ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သော တုံ့ပြန်ချက်များကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ကြုံတွေ့နေရသော ဆိုးကျိုးများကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ် (COVID-19 economic relief plan – CERP) ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီ ၂၇ တွင်ကြေညာခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၇ အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ စုစုပေါင်း ၆၆၇၈ ဦး၊ ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၆ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၅ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။ သံတမန်များမှလွဲ၍ နိုင်ငံခြားသားများအား ဆိုက်ရောက် ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကို မေ ၁၅ ထိ ယာယီရပ်နားထားသည်။ နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ဖျက်သိမ်းခြင်းကို မေ ၁၅ အထိ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သည်။ နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် အချို့ကုန်စည်များကို ကုန်သွယ်ခွင့်ပြု ထားသည်မှအပ ဖြတ်သန်းခွင့်ကို ပိတ်ထားပါသည်။ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ခပ်ခွာခွာနေပါ၊ လူစုလူဝေးကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ အသွားအလာကန့်သတ်ပါ စသည်တို့ကိုလည်း ပညာပေးနေပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီ အတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည်ဟု သံသယရှိသူများကို ၂၁ ရက် မဖြစ်မနေ သီးသန့်ခွဲခြားထားသည့် ကွာရန်တင်း ပြုလုပ်စေပြီး ကူးစက်ခံရသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သော သူများကို ခြေရာခံ၍ ကွာရန်တင်းစင်တာများတွင် ၂၁ ရက်ထားရှိပါသည်။ ထိုသူများ ရောဂါကူးစက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်ရန် ဆေးစစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသော လုပ်သားများကိုလည်း ကွာရန်တင်းစင်တာများတွင် ၂၁ ရက်နေထိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မတ်လလယ်တွင် ကပ်ဘေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အတိုင်အပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော COVID–19 ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု အနေဖြင့် ကပ်ဘေးကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အလတ်စားနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းများကို အတိုးနှုန်းလျှော့ ချေးငွေထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒေါ်လာ ၇၁ သန်းကျော် (မြန်မာ့ GDP ၏ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း) ကို မတည်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေး အထောက်အပံ့အဖြစ် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားသော သင်္ကြန်ကာလ ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲနှင့် ကြက်သွန်များပါဝင်သော ထောက်ပံ့မှု ငါးမျိုးကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဧပြီလအတွက် မိသားစုသုံး လျှပ်စစ်မီတာကိုလည်း ယူနစ် ၁၅၀ အထိ အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခုဆောင်းပါးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ မူဝါဒကို သုံးသပ်ရန်၊ ပိုမိုအားကောင်းစေရေး အားဖြည့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အာရှဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံမှ အစိုးရများ၏ Coronavirus ကပ်ဘေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသော တုံ့ပြန်မှုအချို့ကို လေ့လာ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး(ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ (၂၇-၄-၂၀၂၀)
ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၇၆၀၃၀ ဦး
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၇၇၇၇ ဦး
သေဆုံးသူ – ၅၁၁ ဦး
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဧပြီလကုန်ထိ တိုးမြင့်သတ်မှတ် လိုက်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုလည်း တားမြစ်ထားပါသည်။
အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း/ ကွာရန်တင်း (social distancing and quarantine)
မတ် ၁၆ တွင် စတင်ခဲ့သော အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်းစီမံချက် (Enhanced Community Quarantine) လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ညမထွက်ရ အမိန့်တို့ကို ဧပြီလကုန်ထိ တိုးမြင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
မတ်လ ၁၇ တွင် အစိုးရက ဖိလစ်ပိုင်တနိုင်ငံလုံး ၆ လအထိ ကပ်ဘေးအန္တရာယ်ကာလအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ကြေညာခြင်းသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရများအနေနှင့် ကပ်ဘေးအား တုံ့ပြန်ရန် ကယ်ဆယ်ရေး ရံပုံငွေကို အမြန်ရရှိ စေပါသည်။
အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူများအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ရန် စစ်တပ်နှင့် ရဲသို့ ဧပြီ ၁ တွင် သမ္မတ ဒူတာတေးက အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးထားပါသည်။
ဧပြီ ၂၀ မှစတင်၍ Cebu တွင် ယာဉ်များ အလှည့်ကျ အပြင်ထွက်ခွင့်စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်လိုင်စင်နံပါတ်ပြားရှိ နောက်ဆုံးဂဏန်း ‘မ’ ဂဏန်းဖြင့်ဆုံးသော ယာဉ်များသည် တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် သောကြာနေ့များတွင် အပြင်သို့ထွက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ‘စုံ’ ဂဏန်းဖြင့်ဆုံးသော ယာဉ်များသည် အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးနှင့် စနေနေ့များတွင် အပြင်သို့ ထွက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တော့ မည်သည့်ယာဉ်မှ အပြင်သို့ ထွက်ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ပေ။
မနီလာ ကျန်းမာရေးဌာနသည် လူအစုအပြုံလိုက် ဆေးစစ်ခြင်းအား (တနေ့လျှင် လူတထောင်ခန့်) ဧပြီ ၁၃ တွင် စတင်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များ
စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (stimulus package) အဖြစ် ဧပြီ ၇ တွင် ဒေါ်လာသန်း ၆၁၀ (ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို ၃၀ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ကို ဒေသန္တရအစိုးရများအား ကူညီထောက်ပံ့မှုရန်ပုံငွေ (Bayanihan Grant to Cities and Municipalities) အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။ မြို့တော်များနှင့် ဒေသန္တအစိုးရများကို ဘဏ္ဍာရေးအရ တကြိမ်တည်းသော အပြတ်ထောက်ပံ့ထားမှု ဖြစ်သည်။
မတ် ၁၆ တွင် သမ္မတ ဒူတာတေးက လစာဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ငွေ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် ပံ့ပိုးမှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဒေါ်လာ ၅၃၁ သန်းကို စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (stimulus package)အနေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးရန် ထပ်မံကြေညာခဲ့သည်။
မတ် ၃၀ တွင် ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ လူမှုကာကွယ်ရေး အစီအစဉ် (Social protection program) ကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသည့်မိသားစုများကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အကြားကို နှစ်လတိုင်တိုင် ထောက်ပံ့ပေးထားမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး (ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (၂၆-၄-၂၀၂၀)
ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၁၃၁၄၉၁ ဦး
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၅၇၈၀ ဦး
သေဆုံးသူ – ၉၈ ဦး
မတ် ၁၆ တွင် နယ်စပ်ဂိတ်များကို စတင်ပိတ်ခဲ့သည်။ ပြည်ပမှ ခရီးသွားများကို မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ရရှိသူများကိုလည်း ပြည်ပသို့ ခရီးသွားခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေး လက်အိတ်ထုတ်လုပ်ရန် ရာဘာများ အရေးတကြီး လိုအပ်လျက်ရှိသောကြောင့် ရာဘာကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ထိုင်း-မလေး နယ်စပ်ဂိတ်ကို ဧပြီ ၁၈ တွင် ပြန်ဖွင့်ရန် အစိုးရက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကွာရင်တင်း (သို့) လော့ဒေါင်း – ဝန်ကြီးချုပ်က မတ် ၁၈ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တနိုင်ငံလုံး ၁၄ ရက် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း ( Movement Control Order – MCO) အမိန့်ကို ဧပြီ ၂၈ အထိ တိုးမြင့်လိုက်ပါသည်။ ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီ အတွင်း အပြင်မထွက်ရ ကာဖျူးကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ဧပြီ ၁၄ အထိ ထုတ်ပြန်ချက်အရ စင်ကာပူရှိ မလေးရှားနိုင်ငံသားများသည် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုလျှင် ဆေးစစ်မှုခံယူခြင်း၊ အသွားအလာကန့်သတ်ထားသော နေရာများ (quarantine facilities) တွင် နေထိုင်ပြီးမှ ဝင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဝတ်ပြုရာနေရာများ၊ ဘာသာရေးပွဲများ၊ အားကစားပွဲများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲလမ်းများ ကျင်းပခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားပါသည်။
ဧပြီ ၁ မှ စတင်၍ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် အစားအသောက်များ ဝယ်ယူရန်အတွက် မိမိနေသောအိမ်မှ ၁၀ ကီလိုမီတာအတွင်းသာ သွားလာရန် ကန့်သတ်လိုက်ပါသည်။ အစိုးရက ချမှတ်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာပါက ဒဏ်ငွေ ၂၂၉ ဒေါ်လာ (သို့) ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားအစိုးရသည် COVID-19 နှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်လျှင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အရေးယူလျှက်ရှိရာ လက်ရှိချိန်ထိ လူ ၉၀၀၀ ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီး ဖြစ်သည်။
ဧပြီလလယ်ခန့်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိကို တနေ့လျှင် အယောက် ၁၁၅၀၀ ဆေးစစ်ပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး လှုံ့ဆော်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များ
မလေးရှားနိုင်ငံက စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (stimulus package) သုံးခုကို ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ (မလေးရှားရင်ဂစ် ၂၀ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိသော ပထမအကြိမ် အကူအညီကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ တွင် မလေးရှား ယာယီဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာက ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် COVID-19 ကြောင့် နစ်နာရသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အခြားကဏ္ဍများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အိမ်သုံး၊ စက်မှုသုံး၊ စီးပွားရေးသုံး လျှပ်စစ်မီတာခများကို ၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်ငွေ လျှော့ချပေးရန်ဟု ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
ဒုတိယ စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု အကူအညီကို ဒေါ်လာ ၅၃ ဘီလီယံ (မလေးရှားရင်းဂစ် ၂၃၀ ဘီလီယံ) တန်ဖိုး ထောက်ပံ့မည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်သစ် မှုဟီဒင်ယာဆင် (Muhyiddin Yassin) က မတ် ၂၇ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ဤထောက်ပံ့မှုတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဒေါ်လာ ၂၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ (မလေးရှားရင်းဂစ် ၁၀ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိသော တတိယ စီးပွားလှုံ့ဆော် တုံ့ပြန်မှုကို ဧပြီ ၆ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အခွန်လျှော့ပေါ့ပေးခြင်း၊ လုပ်ခလစာကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ (SME)ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ဖြစ်သည်။ ပထမအသုတ်နှင့် ဒုတိယအသုတ် ထောက်ပံ့မှု နှစ်ခုပေါင်းလျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ GDP ၏ ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဘတ်ဂျက်၏ ၈၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု အကူအညီမှ ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံကို ဝင်ငွေနည်း မိသားစု လေးသန်းအတွက် ငွေသား ထောက်ပံ့ပေးသွားမည့် အစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရောဂါ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး(ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သောဆောင်ရွက်ချက်များ)
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (၂၇-၄-၂၀၂၀)
ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၅၃၄၂၅ ဦး
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၂၉၃၁ ဦး
သေဆုံးသူ – ၅၂ ဦး
မတ် ၂၂ တွင် နယ်စပ်ဂိတ်အားလုံးကို စတင်ပိတ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်က နိုင်ငံတကာလေကြောင်း ခရီးစဉ် ယာယီရပ်နားခြင်းကို မေလကုန်ထိ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအနေဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်ထိ overstaying အတွက် ဒဏ်ကြေးမဲ့ နေထိုင်နိုင်ကြောင်း ဧပြီ ၁၆ တွင် အစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုင်း-မလေး နယ်စပ်တွင် ပိတ်မိနေသော ထိုင်းအလုပ်သမား ၈၀၀ ဦးမှ ၂၆၂ ဦး ပြည်တွင်းသို့ ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ တနေ့လျှင် အယောက် ၃၀၀ သာ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်ခွင့်ပြုရန် ကန့်သတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မတ် ၂၆ တွင် ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဧပြီ ၃၀ အထိ သက်ရောက်မှုရှိသော နိုင်ငံအဆင့် အရေးပေါ်ကာလကို ကြေညာပါသည်။ ထိုသို့ ကြေညာခြင်းသည် ပြည်တွင်း ခရီးသွားလာမှုများအား ကန့်သတ်ရန်၊ လူစုလူဝေးလုပ်ဆောင်ခြင်းအား တားမြစ်ရန်၊ မီဒီယာများကို စိစစ်ရန် အစိုးရကို အကြွင်းမဲ့ အာဏာရရှိစေပါသည်။
စားသုံးကုန် ပို့ဆောင်ပေးသူများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများမှလွဲ၍ တနိုင်ငံလုံးတွင် ဧပြီ ၃ မှစတင်၍ ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း အပြင်မထွက်ရ ကာဖျူးအမိန့်ကို ဝန်ကြီးချုပ်က ဧပြီ ၂ တွင် ကြေညာသည်။
ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကာဖျူးကို ပို၍တင်းကျပ်စေရန်အတွက် အမိန့်စာတခုကို ဧပြီ ၁၀ တွင် ဝန်ကြီးချူပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိန့်တွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ လိုအပ်သော ခရီးသွားရသောအခါ မရှိမဖြစ်သော ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စသည့်လုပ်ငန်းများ) ရှိ ဝန်ထမ်းများသည် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကာဖျူး၏ ပြင်ပအချိန်တွင်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု ထားပါသည်။ ကာဖျုးမိန့် စိုးမိုးမှုရှိစေရန် စစ်တပ်က ကူညီလျှက်ရှိပြီး လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူများကို ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ဒဏ်တပ်မည် ဖြစ်သည်။
စာသင်ကျောင်းများကို ဇူလိုင် ၁ အထိ ဆက်လက်၍ ပိတ်ထားမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါအသစ်ကူးစက်ခံရသော ဖြစ်စဉ်များ လျော့နည်းလာသော်လည်း COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရန် နိုင်ငံတဝှမ်း ချမှတ်ထားသော ကန့်သတ်မှုများကို မေလကုန်ထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၁၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကို စီးပွာ းလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှုအတွက် မတ် ၁၀ တွင် အစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
စီးပွား လှုံဆော်တုံ့ပြန်မှုအတွက် နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံ (ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ ဒသမ ၉ ထရီလီယံ) သုံးမည်ဟု ဧပြီ ၇ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် အလုပ်အကိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေ အစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုမည်။
အခြေခံအလုပ်သမားများ၊ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကို ဧပြီမှ ဇွန်အတွင်း တလလျှင် ဒေါ်လာ ၁၅၃ (ထိုင်းဘတ် ၅၀၀၀) ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။ ကပ်ဘေးကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ငန်းများကို ယာယီရပ်နားခဲ့လျှင် အစိုးရ၏ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော အလုပ်သမားများသည် ၎င်းရရှိခဲ့သည့် လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး(ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ
ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၄၈၆၀၀ ဦး (၂၃-၄-၂၀၂၀)
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၉၀၉၆ ဦး (၂၇-၄-၂၀၂၀)
သေဆုံးသူ – ၇၆၅ ဦး (၂၇-၄-၂၀၂၀)
မတ် ၃၁ တွင် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို ယာယီပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ အရှေ့တီမော-အင်ဒို နယ်စပ်ဂိတ်များ၊ ပါပူဝါခရိုင်အတွင်းရှိ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ဆိပ်ကမ်းများလည်း ပိတ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတွင်း အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ယာယီနေထိုင်ခွင့် ရှိသူများ နိုင်ငံအတွင်းသို့ မဝင်ရောက်မီ ၇ ရက်အတွင်း ကျန်းမာရေးဌာန၏ ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ တင်ပြနိုင်မှ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
မတ် ၂၇ တွင် ဂျာကာတာ၌ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ၍ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ဘားများနှင့် အခြားဖျော်ဖြေရေးစင်တာများကို ပိတ်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို လူထုကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် အစိုးရက မတ် ၃၁ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒေသန္တရအာဏာပိုင်များက ကျောင်းများနှင့် အလုပ်ရုံများပိတ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးပွဲများ ကျင်းပခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်း စသည့် လူမှုရေး တင်းကျပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဒေသန္တရအစိုးရများသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လူမှုရေးတင်းကျပ်မှု ကြီးကြီးမားမား (large-scale social restrictions) လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုနေသော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင် တနေရာနှင့် တနေရာ ကွဲလွဲမှုများရှိနေပါသည်။
ဧပြီ ၁၈ တွင် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းကို တနေ့ အယောက် ၁၀၀၀၀ စစ်ဆေးရန် ကျန်းမာရေးဌာနကို ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဧပြီ ၂၀ အထိ အယောက် ၄၅၀၀၀ ခန့်ကို ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ ၇၂၅ သန်း တန်ဖိုးရှိ ပထမအသုတ် စီးပွား လှုံ့ဆော်ရေးအကူအညီကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
မတ် ၁၃ တွင် ဒုတိယအသုတ် စီးပွား လှုံ့ဆော်ရေးအကူအညီအဖြစ် ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ကူညီမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
မတ် ၃၁ တွင် သမ္မတ ဂျိုကိုဝီက တတိယအသုတ် လှုံ့ဆော်ရေးအကူအညီ ဒေါ်လာ ၂၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံကို ကြေညာခဲ့သည်။ ဧပြီ ၂ တွင် အခွန်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များကို ကြေညာခဲ့ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ အခွန်များကို လျှော့ချပေးဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီ ၇ တွင် အင်ဒိုနီးရှား ဗဟိုဘဏ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ အာရှအခြေခံ အဆောက်အဦး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဘဏ် (AIIB) တို့မှ ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံ ရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
ပထမအသုတ် စီးပွားလှုံ့ဆော်ရေးအကူအညီမှ ဒေါ်လာ ၃၂၄ သန်းကို ဝင်ငွေနည်း မိသားစုများကို ကူညီခဲ့သည်။
တတိယအသုတ် စီးပွားလှုံ့ဆော်ရေးအကူအညီမှ ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံကို လူမှုဖူလုံရေးအတွက် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး (ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ (၂၇-၄-၂၀၂၀)
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၁၂၁၇၇၄ ဦး (၂၀-၂-၂၀၂၀)
ရောဂါကူးစက်ခံရသူ – ၁၄၄၂၃ ဦး
သေဆုံးသူ – ၁၂ ဦး
မတ် ၂၂ တွင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားများ နိုင်ငံတွင်းဝင်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်သည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ကဲ့သို့သော အရေးကြီးကဏ္ဍများတွင် အလုပ်လုပ်နေသော နိုင်ငံခြားသားများကိုသာ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများ နိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
မေ ၄ အထိ မိမိအိမ်သားများမှလွဲ၍ အခြားသူများနှင့် လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားသည်။ စည်းကမ်းချက်ကို ချိုးဖောက်လျှင် ထောင် ၆ လနှင့် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ဒဏ်တပ်မည် ဖြစ်သည်။ အပြင်ထွက်လျှင် လူတိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ရောဂါကပ်ဘေးကို ကာကွယ်ရန် ကျောင်းများနှင့် အရေးတကြီးမဟုတ်သော အချို့အလုပ်များကို ပိတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၃ တွင် ဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက ကြေညာသည်။
ဧပြီ ၅ တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနေထိုင်သော အဆောင်အိမ်ရာ ၂၀၀၀၀ တွင် ကွာရန်တင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အများစုမှာ တောင်အာရှမှလာသော အခြေခံအလုပ်သမားများ ဖြစ်သည်။ ဧပြီ ၁၄ အထိ နိုင်ငံတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်၏ တဝက်ကျော်မှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နေထိုင်သော အဆောင်များတွင်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး လှုံ့ဆော်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များ
စင်ကာပူနိုင်ငံက စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှုအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၂ ဘီလီယံ (စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၉ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ) သုံးမည်ဟု ကြေညာသည်။ ယင်းပမာဏသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ GDP ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
ရောဂါ ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး (ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၅၀၄၀၁ ဦး
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၅၉၁၃ ဦး
သေဆုံးသူ – ၁၅၂ ဦး
မတ် ၂၁ မှစ၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ဧပြီ ၃၀ အထိ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ မတ် ၂၆ မှ စသော လူထုအားလပ်ရက်ကို မေ ၅ အထိ တိုးမြင့်လိုက်သည်။ ယင်းအားလပ်ရက်တွင်း ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်နားထားသည်။
ဧပြီ ၁၃ ကတည်းက မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ပိတ်ထားပါသည်။
မတ် ၂၆ မှ ဧပြီ ၄ အထိ အသွားအလာ ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (shutdown) ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဧပြီ ၁ တွင် shutdown ကာလကို ဧပြီ ၁၁ အထိ တိုးလိုက်ကြောင်းအစိုးရမှ ကြေညာခဲ့သည်။
ဧပြီ ၁၀ တွင် အစိုးရရုံးများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုံးများ မေ ၅ အထိ ဆက်၍ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဧပြီ ၂၅ အထိ ရပ်နားထားမည်ဟု ထပ်မံကြေညာခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် လူများကို အိမ်ပြင်မထွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒါကာမြို့ ရှိ ၇၅ နေရာတွင် လော့ဒေါင်းချထား၍ ည ၆ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရ ကာဖျူးမိန့်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မတ် ၃၁ တွင် စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု အကူအညီ ဒေါ်လာ ၅၉၅ သန်းခန့်ကို ပို့ကုန်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုမည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။ လစာငွေများကို ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် စက်ရုံပိုင်ရှင်များကို အတိုး ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နှစ်နှစ်တာချေးငွေ ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၅ တွင် ဝန်ကြီးချူပ်က ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံခန့် တန်ဖိုးရှိ နောက်ထပ် စီးပွားလှုံ့ဆော်မှု အကူအညီကို ထပ်မံကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ အကူအညီကို အစိုးရအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ခြင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍတိုးမြှင့်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်ရှိ ငွေကြေးပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စီးပွားလှုံ့ဆော်မှု တုံ့ပြန်ချက်များ အစီအစဉ်ချမှတ်ရာတွင် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးသူစုစုပေါင်း – ၆၀၉၅၆ ဦး
ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ – ၄၂၉ ဦး
သေဆုံးသူ – ၆ ဦး
နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော ခရီးသွားများထံမှ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ခဲ့သူများ၊ ခံစားခဲ့ရသော ရောဂါများလက္ခဏာများ၊ ခရီးသွားခဲ့သောနေရာများ စသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သော ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းကို ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကတည်းက ရယူခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့် ၁၄ ရက်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားဖူးသော နိုင်ငံခြားသားများ နိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၇ တွင် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ လူစီးသင်္ဘောများ ထိုင်ဝမ်ကမ်းသို့ ကပ်ခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော SARS ကပ်ဘေး၏ အတွေ့အကြုံအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးတွင်လည်း နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်းကို အဓိကထား၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် ပြည်ပသို့ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တင်ပို့ခြင်းအား ဇွန်လကုန်အထိ ဝန်ကြီးချူပ်က ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ကား၊ ရထား စီးသူများ၊ ကားမှတ်တိုင်နှင့် ရပ်နားနေရာများတွင် နားနေသူများအားလုံး နှာခေါင်းစီးများ တပ်ထားရမည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးက မတ် ၃၁ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ တွင် မှုလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ အထိ ပိတ်လိုက်သည်။
ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့် နေရာများသို့ သွားခဲ့သောသူများကို အိမ်တွင်းသာနေထိုင်ရန် (home quarantine) ညွှန်ကြားထားပါသည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူများနှင့် ကူးစက်နိုင်ဖွယ်ရှိ သောသူများကို အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားခြင်းအား လိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ သိနိုင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် စောင့်ကြည့်သော အစီအစဉ် (Digital- fence) ကို မတ်လလယ်ခန့်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
စီးပွားလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု အကူအညီ ဒေါ်လာ ၃၄ ဒသမ ၇၂ ဘီလီယံခန့် အသုံးပြုမည်ဟု သမ္မတ စိုင်အင်ဝမ် (Tsai Ing-wen) က ဧပြီ ၁ တွင် ကြေညာသည်။ အဆိုပါ ပမာဏသည် တိုင်းပြည် GDP ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ နှိုင်းယှဉ်မူဝါဒ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြည့်လျှင် မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့သည် ‘များများစစ်’ ပြီး ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချူပ်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသည် မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် တရက်လျှင် ရာဂဏန်း ကူးစက်နေရာမှ ဧပြီလလယ်တွင် တရက်လျှင် ဆယ်ဂဏန်းသာ ကူးစက်နှုန်း လျော့ကျခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံသည်လည်း ရောဂါကို များများစစ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်ပါနိုင်ငံအားလုံးပင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ နယ်စပ်ဂိတ်များကို ပိတ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်နားထားခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။
အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း/ ကွာရန်တင်း (social distancing and quarantine) များကို ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အိမ်တွင် ထားရှိ၍ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (home quarantine)၊ ဟိုတယ်တွင် ထားရှိ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (hotel quarantine) နှင့် သတ်မှတ်နေရာများတွင် ထားရှိပြီး အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်းတို့ကို အထက်ပါ နိုင်ငံများအားလုံးတွင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံသားများလိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် အစိုးရများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကွဲပြားမှုများရှိပါသည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသည် ရောဂါကူးစက်ခံရသူများနှင့် ကူးစက်နိုင်ဖွယ်ရှိ သောသူများကို အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားခြင်းအား လိုက်နာမှုရှိမရှိ သိနိုင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် စောင့်ကြည့်သော အစီအစဉ် (Digital- fence) ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံရသူများ၏ လုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် မရှိအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူပင် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ နည်းလမ်းမှာလည်း နိုင်ငံသားများ အစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာစေရန် ဥပဒေအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ကူးစက်နှုန်းများသိသိသာသာ လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (stimulus packages) အတွက် အများအားဖြင့် အလတ်စားနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းများကို အတိုးနှုန်းနည်းနည်းဖြင့် ချေးငွေကူညီပေးခြင်း၊ အခွန် လျှော့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဝင်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် လူမှုဖူလုံရေး အစီအစဉ်များကိုမူ ထိုင်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်သာ ဦးစားပေးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကပ်ဘေးကာလတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများအတွက် အတိုင်းအတာတခုအထိ အကူအညီ ဖြစ်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။
Athira Nortajuddin. (16 April 2020). How Malaysia Is Winning The War Against COVID-19.
Center for Strategic and International Studies (CSIS. Southeast Asia Covid-19 Tracker. https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0
Department of Health, Republic of the Philippines. COVID-19 Tracker. https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
Fair Wear. Covid-19 Impact and Responses: Bangladesh. https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/covid-19-guidance-for-production-countries/covid-19-impact-and-responses-bangladesh/
Hsien-Ming Lin. Lessons from Taiwan’s coronavirus response. https://www.eastasiaforum.org/2020/04/02/lessons-from-taiwans-coronavirus-response/
KPMG. Bangladesh government and institution measures in response to COVID-19. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bangladesh-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
KPMG. Taiwan Government and institution measures in response to COVID-19. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
Lin C, Braund WE, Auerbach J, Chou J-H, Teng J-H, Tu P, et al. Policy decisions and use of information technology to fight 2019 novel coronavirus disease, Taiwan. Emerg Infect Dis. 2020 Jul [27April 2020]. https://doi.org/10.3201/eid2607.200574
Ministry of Health and Sport, The Republic of Union of Myanmar. 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐚𝐬𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 (𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗) Surveillance Dashboard (Myanmar). https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
Ministry of Health Malaysia, Official Portal. COVID-19 (latest updates). http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan
Ministry of Health, Singapore. Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation. https://www.moh.gov.sg/covid-19
Reliefweb. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO Thailand Situation Report – 26 April 2020. https://reliefweb.int/report/thailand/coronavirus-disease-2019-covid-19-who-thailand-situation-report-26-april-2020
The Jakarta Post. (April 27, 2020). Indonesia’s latest official COVID-19 figures. https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/indonesias-latest-covid-19-figures.html
Taiwan Centers for Disease Control. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov.tw/En
L ဂွန်ဂျာထုန်သည် ISP-Myanmar ၏ Senior Researcher တဦး ဖြစ်သည်။